शरिर शर्माले भने
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्विस फुटबल खेलाडीहरू शरिर शर्माले भने
LB ले उपनाम द्वारा प्रख्यात एक बाँया पछाडि जीनियसको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ; 'Magic dwarf'। हाम्रो जेहरदान शाकिरी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ। विश्लेषण प्रसिद्धि भन्दा पहिले उनको जीवन कहानी, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र धेरै उहाँबाट पिच कम-ज्ञात तथ्यहरू सामिल छन्।
हो, सबैलाई आफ्नो अप्रत्याशितताको बारेमा थाहा छ तर केहीले जेरदान शाकिरीको जीवनीलाई ध्यान दिँदछ जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
शरिर ऋषिरी गजिलन मा अक्टोबर 10 को 1990th दिन मा जन्म भएको थियो, एक शहर र पूर्वी कोसोवो, सर्बिया (पूर्व युगोस्लाविया) को गजिलन जिल्ला मा स्थित नगर पालिका।
ऊ जन्मबाट तुला हो। जेरडानको जन्म उनकी आमा फातिम शाकीरी (एक सेवानिवृत्त क्लीनर) र बुबा ईसेन शाकीरी (अवकाशप्राप्त अल्पाइन कृषक) मा भएको थियो।
१ 1992 XNUMX १ X मा आफ्ना तीन भाइबहिनीसँग जेर्दान शाकीरी अभिभावक स्विजरल्याण्ड बसाई सरेका थिए। आदर्श रूपमा, Xherdan धेरै राष्ट्रीयता छ। तिनीहरूले समावेश छन्; स्विस, कोसोभो, अल्बेनियाली र स्विस। झेरडानले प्राकृतिकरणको माध्यमबाट आफ्नो स्विस नागरिकता प्राप्त गरे.
नयाँ आप्रवासीको रूपमा, झेरदान शाकिरीको स्विस संस्कृतिमा एकीकरण द्रुत थियो। उसको स्कूलको समयमा, उनी कक्षामा एक मात्र विदेशीको रूपमा देखिन्थ्यो। ऊ बुबाबाट आल्पाइन फार्ममा काम गरिरहेको थियो जब ऊ स्कूलबाट फर्कदै थियो। उनले आफ्नी आमा, फातिमले सफा गर्ने कामबाट फर्केपछि लुगा बिक्री गर्न पनि मद्दत गर्थे।
युवा प्रवासीहरूले चाँडै गरीबीबाट बाहिर निस्कन फुटबल लिनेहरू देखेर जेर्दानका बुबा आफ्ना छोराहरूलाई फुटबल सुरु गर्न प्रोत्साहित गर्न उत्प्रेरित भए। उनले चाँडै नै आफ्ना तीन छोराहरूलाई नजिकैको स्थानीय युवा क्लब, एसभी अगस्ट १ 1999 XNUMX। मा दर्ता गरे। यो सबैभन्दा कान्छो (झेरडान शाकीरी) हो जसले मुद्दा चलाएको थियो। उनले क्लबको लागि राम्रो शुरुआत गरे। "आफू कहाँको हो भनेर नबिर्सनुहोस्," जेर्दानका बुबाले कुनै ठूलो प्रतिस्पर्धा अगाडि उसलाई भन्नुहुने थियो।
लगातार उनको टीममा शीर्ष खेलाडी भएकोले उसलाई एफसी बासेलमा स्थान प्रदान गर्‍यो। त्यहाँ, उनले तीन स्विस सुपर लीग शीर्षक सहित धेरै सम्मान जितेका थिए, सर्नु अघि Bayern म्यूनिख, जहाँ कम प्रायः खेल खेल्न को लागी उनले आठ घरेलू र अन्तरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त गरे।
जनवरी २०१ 2015 मा, उनी १ Mila मिलियन डलरको शुल्कका लागि इन्टर मिलानमा सरेका थिए, र सात महिना पछि स्टोक सिटी एक क्लब रेकर्ड £ 12 मिलियन को लागि। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एक पटक, त्यहाँ Xherदान शाकीरी एक प्रेमिका वा पत्नी भएको एक अफवाह थियो, तपाईं पछि यो अप्रमाणित भयो। जबकि हालसालै, एक नयाँ प्रमाण आइपुगे। Magic Dwarf अन्ततः एक स्टोक रेस्टुरेन्टमा एन्जेलिका नामको मोडेलको छेउछाउमा खुलेआम पक्राऊ पर्‍यो। यहाँ Magic Dwarf छ।
धेरै समय लागेन पापर्याजिसले जादू ड्वार्टलाई डब्लुएजी एन्जेलिकासँग यति मनमोहक हुँदै गएको देख्यो कि तलको फोटोमा। जादुई बौनी आफ्नो प्रेमिका संग यति मनमोहक भइरहेको छ।
स्विस-अल्बेनियन् खेलाडीले पछि यसो भने: "मलाई पपाराजीले मेरो तस्बिर खिचेको मैले याद गरेन।" र एन्जिलिका बारे: “मेरा केहि साथीहरूले उक्त महिलालाई रेस्टुरेन्टमा ल्याए। उनी मेरी श्रीमती होइनन्। म अहिले को लागी भन्न सक्दछु! " ठिक छ, शाकीरी यस भन्दा स्पष्ट हुन सक्दैन!
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
एक स्थानीय अल्पाइन किसानको रूपमा आफ्नो प्रवासी आमा र एक क्लीनरको रूपमा प्रवासी आमाले गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। फुटबल लगानीबाट फर्काउनु अघि यो शेररीको मामला थियो।
एसेन शाकिरी एक सख्त र धेरै विवादास्पद पिता जानिन्छ। उनको अविस्मरणीय काम र उनको डरहरु लाई उनको डरहरु को सामना गर्न को लागी एक्शन को लागि जिम्मेदार छ स्विस सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतिभा.
युवावस्थादेखि नै इन्सले आफ्नो छोराको सफलताको सबै महिमा लिए।
उनको शब्दमा पापा Isen: “हाम्रो जीवनमा पनि गाह्रो समय थियो, हामी गरिब र धनीलाई चिन्छौं। मैले सधैं मेरा छोराहरूलाई फुटबलको लागि पूर्ण समर्थन दिएको छु। मेरो बच्चा तिनीहरूको मुखमा सुनको चम्चाको साथ जन्म भएको थिएन भन्ने तथ्यले मात्र हामीलाई बलियो बनायो। मेरा तीन छोराहरू मध्ये, भाग्य कि Xherdan अलग जन्मजात, भाग्यशाली छ! किनभने त्यसले उसलाई अझ विशेष बनाउँछ। ”
आफ्नो छोराको धनको लागि धन्यवाद, इसेन शाकीरीलाई उनको फार्मको कामबाट अवकाश लिन बाध्य पारियो। आजकल, उसले आफ्नो छोरा सँगै फुटबल खेल्नु बाहेक अरू केही गर्दैन। तल उसको र उनकी पत्नी फातिम शाकिरी उनीहरूको छोराको प्रशिक्षण सत्रमा भाग लिदै छन्।
झरदान शाकिरीका अभिभावक आफ्ना छोरालाई प्रशिक्षण सत्रमा हेर्दैछन्।
झरदान शाकिरीले कमाएको ठूलो फुटबल मोनिस राम्रोसँग लगानी गरिन्छ, अधिमानतः रियल ईस्टेटमा जुन उनका बुवा इसेन शाकीरीले व्यवस्थापन गर्छन्।
मातृभाषा: शेर्दानकी आमा फातिमे, उनको व्यक्तित्वको हिसाबले उनको छोराको धेरै सुरक्षा छ।
जब "शाक" उसको आमालाई बोलाउँछिन्, उनी कुनै स्पोर्टी सुन्न चाहन्नन्। उनी केवल सुन्न चाहन्छिन् कि उ ठीक छ र कुनै फुटबल चोट छैन।
उनको आमा Fatime को शब्दहरु मा: “जेर्दानले सधैं मेरो खाना मनपराउँथ्यो। He विशेष गरी मेरो अल्बेनियाली विशेषताहरू मन पराउँदछ। दुर्भाग्यवस, मलाई उसको लागि पकाउन अनुमति छैन किनकि ऊ इ England्ल्यान्डमा टाढा नै बस्दछ। जब हामी आफैंलाई भेट्छौं, उहाँ मेरो खाना खान दिनुहुन्छ। ”
ROTHERS: एरनिट शाकी र एर्दिन शाकिरी जेरदान शाकीका दुई जेठा दाजुभाइ हुन्। एर्डिन हाल आफ्नो लेखनको समय जस्तै आफ्नो क्यारियरको प्रबन्ध गर्दछ। ऊ स्टक-अन-ट्रेंट, इ England्ग्ल्याण्डमा बस्छ। उसको अर्को भाई अरिनित म्युनिकमा उहाँसँगै बस्छन्। उहाँ नजिकको मित्र हुनुहुन्छ फ्रैंक रिबेरी। दुवै अर्डिन र Xherdan दुवै घर पिंग-पोंग र प्लेस्टेशन प्ले गर्छन्।
एरियानिट (बाँया) -इर्डिन (केन्द्रीय) - र Xherdan (दाँया)।
सिस्टर: मेदिना शाकिरी शेररी शहीरी को मात्र बहिनी हो। उनी हाल स्विट्जरल्याण्ड र धेरै समयमै बस्छन्, इङ्गल्याण्डमा उनको भाइलाई भेट्छ (उनको देश लेखनको रूपमा जस्तै खेलको)।
उनको शब्दहरु मा ... “म परिवारको कान्छी हुँ र मलाई मेरा तीन जना भाइहरू मन पर्छ। दुर्भाग्यवश, म मुश्किल मा Xherdan उनको फुटबल प्रतिबद्धता को कारण देख्न। म उसको सबैभन्दा ठूलो फ्यान हुँ र आशा छ कि उसले आफ्नो क्यारियरमा धेरै जित्यो। हामी सबै उहाँमा धेरै गर्व गर्छौं। “
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -शारीरिकता
जबर्जस्ती शकिरीले आठ वर्ष पुरानो भए पनि प्रशिक्षण सत्र छुटेको छैन। विस्फोटक शक्ति एथलीटले आफ्नै प्रकारको प्रशिक्षणको मागको लागि चिनिन्छ। वास्तवमा, तिनले आफ्नै विशाल पोलसँग प्रशिक्षण लिने उनको साथ लिन्छन्। उहाँले आफ्नो क्यान्सरमा धेरै वजन राख्नु मनपर्छ जसले संसारलाई धक्का दिन्छ।
मैजिक ड्वार्फले आफैंको विशाल पोललाई प्रशिक्षणमा लैजान्छ।
यो 'Mayआईसी बौना उसको छोटो स्टकी फ्रेमका लागि परिचित छ जुन उनको खुट्टाको आन्दोलनलाई उत्तम बनाउँदछ। यदि तपाईं खुट्टाको बलियो सेट बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले लन्ज गर्नु पर्छ। तपाईंको मुटुलाई लुकाउनुहोस्। एक जवान शाकीरीलाई बच्चाको रूपमा भन्नु परेको हुनुपर्दछ।
कहिलेकाहीँ स्टक सिटी टोली बस ब्रेक हुनेछ, भरोसेमंद स्विस पाउडरहाउस बन्द हुनेछ र मिडफील्डमा 90-मिनेट पारीमा राख्नु पहिले बाँकी बाटोलाई तान्नुहोस्। निस्सन्देह, तल उनको शारीरिकता देखाउँछ त्यो सक्षम र आफ्नो गन्तव्यमा बस बस तान्नु सक्षम छ।
उहाँको आंदोलनले आफ्नो यमको आकारको पाटोलाई लाभ पुऱ्याएको छ जुन यसको बल र कपालको आधार हो। आफ्नो प्रकारको बोसो मांसपेशिहरु संग, त्यहाँ चोट को एक कम जोखिम भएको छ। वास्तवमा, केहि प्रशंसकहरु ले भन्यो कि त्यो एक पैर प्रेस मिसिन को तहत जन्म भएको थियो।
उनको कफी मांसपेशिहरु को मूल फिर्ता भयो जब शाकिरी एक बच्चा थियो। जाहिर छ, तिनका आमाबाबुले उनलाई एक चप्पलको रूपमा एक स्पेस रेटर खरिद गर्न इन्कार गरे। त्यसैले शक्किरीले आफ्नो इजरायल को आसपास आफ्नो कल्पनात्मक आशाकर्ता मा उछाल गर्नेछन्, जसले उनको भयानक पैदल शक्ति को शुरुआत को देख्यो।
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उपनाम पछिको कारण
फिफाको आधिकारिक वेबसाइटले उनको वर्णन गर्दछ "अप्रत्याशित" बलमा र यसरी उसलाई बोलाइयो "जादुई बौना".
शाकिरीलाई अल्पाइन भनिन्छ Messi, न केवल उनको गति र प्रतिभा को लागि, तर त्यहि कडा साझा गर्न को लागि। शाकिरी र मेसी दुवै 1.69m नजिकैको हुन्छन् जुन गुरुत्वाकर्षणको कम केन्द्र हो, जसले उनीहरूको उल्लेखनीय शैलीमा मद्दत गर्दछ।
यस तथ्यले शाकरीलाई कार्टमा चुनेको छ फिफा 15 अर्कोतिर स्विट्जरल्याण्डमा लिओनेल मेस्सी.
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -कोका कोला प्रमोटर
स्विस मा, केहि प्लास्टिक कोका कोला बोतलहरु मा यो छ, फुटबल स्टार झेरदान शाकिरी को एक लपेटिएको छवि। शाकीरी एक पटक कोका कोलाको प्रवर्तकका रूपमा छानिएका थिए।
अब, उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन संग बायर्न मन्च, स्टोक सिटी साथै साथ स्विस राष्ट्रिय टोली उनले स्विस बजारमा कोका कोलाको अनुहार बनाएको छ। धेरै युवाहरु र वृद्ध स्विस मान्छे यो जरडन फोटो मार्फत गर्न सक्छन् भनेर सोध्न मनपर्छ। यसले अन्य कोका-कोला पेय छोड्छ बिना उनको फोटो कम बेचेको छ। तिनीहरू सधैं पिउन किन्न तयार छन्।
शरिर ऋषिरीको मन र दिमागमा रहेको छ स्विस फुटबल प्रशंसकहरू। शाकीरीको कोका-कोला बोतल कभरमा प्रकट गरिएको कोडहरू मार्फत पैसाले धेरै स्विसलाई धनी बनायो।
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -मुस्लिम अभ्यास गर्दै
2014 फीफा विश्व कप को समयमा उनको टी्यू मुस्लिम विश्वास परीक्षण भयो। लगभग 30 वर्षहरूमा पहिलो पटकको लागि, रमजान विश्व कपको दौडान हुन्थ्यो।
यो एक समय थियो जहाँ सबै मुसलमानले 30 दिनको लागि सूर्योदय सम्म सूर्योदय बाट छिटो लगाउनु पर्छ। टूर्नामेंटको समयमा, धेरै मुस्लिम फुटबल खेलाडीहरू छनौट गरियो।
Xherdan, बरु Mesut Ozil, 2014 फीफा टूर्नामेंट को समयमा उनको ईमानदारी देखि उपस्थित हुँदा ईमानदार रूप देखि उपवास राखीएको छ स्विस राष्ट्रिय टोली। आदर्श रूप मा, उहाँ एक मुस्लिम हुनुहुन्छ जसले येशूलाई विश्वास गर्दछ र क्रिसमस मनाउँदछ।
Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -राशि चक्र
शरद शखररी लिबिया हो र यसको व्यक्तित्वको निम्न विशेषता हो।
Xherdan शाकीरी क्षमताहरु: सहकारी, राजनयिक, दयालु, निष्पक्ष-मानसिक, सामाजिक
जेरदान शाकिरीका कमजोरीहरू: अतिक्रमण, टकरावबाट जोगाउँछ, एक दयालु, आत्म-दयालु हुनेछ
Xherdan Shaqiri को तुला लाइक मन पर्छ: सद्भाव, सहानुभूति, अरूसँग साझेदारी गर्दै, बाहिर
जेरदान शाकिरीको तुला नाप्न मनपराउँदैन: हिंसा, अन्याय, loudmouths, अनुरूपता।
हाम्रो Xherdan Shaqiri बचपन कहानी प्लस अनकही जीवनी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
स्टक सिटी फुटबल डायरी
जुआन बर्नैट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यो मतलब, जब तपाईं मनपराउने केहि चीज प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले यो गरिरहनु भएको छ।
जेर्डन, हामी तपाईलाई गर्व गर्छौं, म निश्चित छु कि तपाईलाई त्यो थाँहा छ।
तर, हामी दिनको लागि पर्खिरहेका छौं, तपाईं कोसोवोका लागि खेल्नुहुनेछ, त्यो चोटी हुनु भएको छ
हे! यो यस्तो राम्रो पोष्ट हो। झरदान शाकिरी वास्तवमै एक धेरै अचम्मै खेलाडी हो र म निश्चित छु कि उसले आफ्नो फुटबल क्यारियरमा धेरै चीज हासिल गर्नेछ। म तपाईको कामको लागि कदर गर्छु। मैले जेर्दन शाकिरीमा लेख पनि लेखेको छु। कृपया यसलाई जाँच गर्नुहोस्, केहि दिन स्वस्थ च्याट / छलफलको लागि तत्पर हुँदै। धन्यवाद